स्वस्थानी कथाको सन्देश के हो ? साँखु शालिनदी मेला (भिडियो सहित) «
स्वस्थानी कथाको सन्देश के हो ? साँखु शालिनदी मेला (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति : 16 January, 2020 2:03 pm
– डा. कविताराम श्रेष्ठ
स्वस्थानी कथामा शीवजीको कथा प्रथम नायकको रुपमा प्रस्तुत भएको छ । उनी नन्दीभृंगी भूतप्रेत पिसाचका मालिकका रुपमा प्रस्तुत छन् । उनी नांगा जंगली असभ्य देखिइन्छन् र तत्कालीन समाजमा कन्यासम्म नपाउने स्थतिमा उनी रहेका हुन्छन् । उनी असुरबाट त पूजिइन्छन् तर सूर अर्थात देवहरुबाट अस्वीकृत हुन्छन् । तथा ठूलै संघर्षपश्चात उनी देवकोटीमा ल्याइन्छन् । यस कथाले के सन्देश दिएको छ – त्यसैका विवेचना यो लेखको आशय हुन पुगेको छ ।
सम्पूर्ण रिगवेदमा रुद्रका लागि तीन वटा (राहुल सांकृत्यायन – १४।६ १५।७ १५।५८) रिगवैदिक आर्य मात्र पूर्ण सूक्तहरु उपलव्ध छन् । यसदेखि बाहेक केही अरु सूक्तहरुमा रुद्रलाई अरु देवताहरुका साथमा स्तुति गरिएको छ । यसरी उनका नाम प्रायः ७५ पल्ट आउँछ । (वेदिक मिथोलोजी पिए मेकडानलाल्ड) ।
आर्यहरु पश्चिमबाट आएर सिन्धुघाँटी तथा गंगाको मैदानको मनसुनी क्षेत्रमा बस्दथे र खेतीपाती र पशुपालन गर्दथे । पहाडको टुप्पाको नजीक चम्कँदै गर्जेर उडी िहंड्ने बादलले वर्षा हिमपात र बज्रपातका साथै डरलाग्दो आँधीव्यारी भेल र पैरो पनि चलाएको उनिहरुले देखे । यही ध्वंसात्मक प्रकृतिमा उनीहरुले भयानक र क्रूर रुद्रलाई देखे र पहाडका फेदीमा बस्ने दोपाया र चौपायाको कल्याणको निमित्त उनीहरु रुद्रको स्तुति गर्दथे । (विजि भण्डारकर र वैष्णविज्म शैविज्म एण्ड अदर माइनर रिलिजन्स) । रुद्रलाई ती सूक्तकर्ताहरुले बादल बिजुली आँधीव्यारी र हिमपातको रुपमा विध्वंसक मात्र नभई कल्याणकारीका रुपमा पनि हेरेका छन् । (राम दास गौड – हिन्दूत्व ) ।
यस्तै यहींबाट लिँग स्वरुप चुच्चा चिल्ला चिल्ला धेरै ढुंगाहरु पाइएका छन् जुन प्रजननदेवको अर्काे प्रतीक रुप हुनसक्छ । रिगवेदमा दुई पल्ट शिश्नदेवा (राहुल सांकृत्यायन – १४।६ १५।७ १५।५८ रिगवैदिक आर्य) भन्ने वहुवचनसूचक शब्दको प्रयोग भएको पाइन्छ । यसमा शिश्नोपासकहरुलाई टाढै राख भनी ती उपासकहरुलाई वहिस्कार गरिएको छ । यसको तात्पर्य यही हुन्छ कि त्यहाँका आदिवासीहरुमा शिश्न लिँग को उपासना चल्दथ्यो ।
देवताहरुद्वारा दुराचारी घोषित गरिएका यी असुर तथा रुद्रगणलाई शिव वरदान दिन्थे शक्ति दिन्थे र उनका तरफदारी भएर पनि लडथे । अतः शतरुद्रीयको सोही स्थान रुद्रलाई स्तेनानाम्पति अर्थात चोरहरुका मालिक स्तायुनाम्पति अर्थात ठगहरुका मालिक तस्करणाम्पति अर्थात डाकुहरुका मालिक आदि भनिएको छ । यो त स्पष्टै छ आर्यहरु अनार्यहरुलाई कहिल्यै सभ्य र सदाचारीको रुपमा लिन तयार थिएनन् । ती शब्दहरु हेय दृष्टिमा प्रयोग भएपनि र नभएपनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि रुद्र अनार्य देव थिए । (रामधारी िसंह दिनकर – संस्कृतिका चार अध्याय) ।
पुराणमा ऋषिपत्नीहरुले नांगो शिवका लिँगदेखि कामोत्तेजित भएर महादेवका पछि लागेको र ऋषिहरुले आफ्ना पतिता स्त्री र महादेव दुवैलाई श्राप दिएको वर्णन पाइन्छ । यसवाट स्पष्ट हुन्छ कि ऋषिपत्नीहरुको स्वाभाविक आस्था शिवभक्तिप्रति थियो र आफ्ना आराध्यदेव शिवोपासनामा उनीहरु पागल थिए । (रामधारी िसंह दिनकर – संस्कृतिके चार अध्याय) ।
त्यस कालसम्ममा शिवमाथिको जुन धारणा आर्यहरुले जन्माए थे जुन स्वरुप उनलाई दिएथे त्यसै स्वरुपलाई स्वीकारेर अर्थात् जंगली असभ्य नांगो शिवलाई यथारुप दिएर सौम्य शिवको स्थापना गरी प्रगतिशील ब्राह्मणहरुले उपनिषद्हरु लेखे र यी उपनिषद्हरुले नयाँ धर्म दर्शनको सूत्रपात गरे । त्यहाँदेखि नै शैवमत एउटा धर्मको रुपमा स्पष्ट हुन आयो । यसपछि पुराण तथा महाकाव्यहरुमा नाग गन्धर्व तथा यक्षलाई देवत्व प्रदान र शूद्र तथा असुरहरुलाई पनि ठाउँ ठाउँमा सदाचारी र ज्ञानी अध्यात्मवादीको रुपमा लिइन लाग्यो । यसरी मानव दानव सुर असुर सवै जातिबाट पुजिने एक मात्र देवता शिव महादेवका रुपमा पुजिन लागे र कालान्तरमा महादेव उनका मुख्य नाम नै भएर प्रतिष्ठापित भयो । यसो भन्न सकिन्छ महादेव आर्य र अनार्यहरुका मिश्रित संस्कृतिका केन्द्रविन्दु हुन् । (रामधारी सिह दिनकर – संस्कृतिके चार अध्याय ।) जुन विन्दुमा आएर युगौंदेखिका राजनीतिक संघर्ष र आध्यात्मिक मान्यताको संघर्षको इति हुन्छ । आर्य अनार्यका संयुक्त मान्यतामा एउटा धर्म शैवधर्मको शुरु हुन्छ ।
इति (By समकालिन साहित्यबाट )